Ikhaya > IPrroloquinoline Quinone (PQQ)
ICofttek yinkampani yobungcali esele ikwimakethi ukusukela ngo-2012 kwaye iyaziwa ngeemveliso zayo ezikumgangatho ophezulu. zongeza Kungenxa yokuba i-gluten-free kwaye ayinazo i-allergen eziqhelekileyo. Ke, abantu abachaphazeleka kwiindidi ezahlukeneyo zezinto ezaliwa ngumzimba bangaluthatha olu ncediso ngaphandle kokuphulukana noxolo lwengqondo. Isongezelelo seCofttek PQQ yenye yezona zinto zibalaseleyo Iprroloquinoline Quinone izongezo ezikhoyo ngoku kwintengiso. Ukuba ujonge enye imifuno, sicebisa ukuba uthenge isongezelelo sePQQ saMandla kwi Cofttek.
I-Pyrroloquinoline Quinone disodium ityiwa ye-FAQ
I-Pyrroloquinoline Quinone okanye i-PQQ sisiciko esikhoyo kwizityalo kunye neebhaktiriya ezininzi kunye nee-eukaryotes zeseli enye, njengegwele. I-PQQ ikwakhona ngokwemvelo kubisi lwebele lomntu kunye neesosi zesosi, i-kiwi, ipapaya, isipinatshi, iparsley, i-oolong, ipepile eluhlaza kunye neti eluhlaza. Uphando olwenziwe kwizilwanyana lu dibanise ukunqongophala kwe-PQQ okanye ukunqongophala kwe-PQQ kunye nokuphendula okungalunganga komzimba, ukuthothisa ukukhula, ukusebenza ngendlela engaqhelekanga kunye nokunciphisa ukuguquguquka kwemetabolism.
Kwiminyaka emininzi, abaphandi babecinga iPyrroloquinoline Quinone (PQQluhlobo lwevithamini. Nangona kunjalo, uphando olwenziweyo kule minyaka imbalwa idlulileyo lutyhile ukuba iPyrroloquinoline Quinone sisondlo esineempawu ezifana neevithamini ezinamandla okwenza izinto njenge-co-factor okanye i-enzyme booster kwinkqubo yokunciphisa i-oxidation ebandakanya ukuhanjiswa kwee-elektroni phakathi kweebini. iintlobo. Ngamazwi alula, i-PQQ iyazibophelela ngequinoproteins ezikhoyo emzimbeni kwaye isebenza ngokubambisana nabo ukulahla iiradicals zasimahla. Isifundo sophando sifumanise ukuba ii-quinoprotein zinokuphindaphindwa kalikhulu kune-Vitamin-C njenge-anti-oxidant. Izifundo zamva nje zikwabonakalisile ukuba i-PQQ ichaphazela ukuhanjiswa kwamandla kunye nesetabolism yeselula ngokwandisa inani elipheleleyo le-mitochondria emzimbeni. Ezi zibakala zibalulekileyo ezibangele ukunyuka ngesiquphe kokuthandwa kwePyrroloquinoline quinone kule minyaka idlulileyo.
Yenza ntoni i-pyrroloquinoline quinone?
Ukongeza ekubeni yinto yokukhula kwezityalo kunye ne-bacterial cofactor, i-pyrroloquinoline quinone (PQQ) ikhusela i-mitochondria kuxinzelelo lwe-oxidative kwaye ikhuthaza i-mitochondriogenesis.
Yimalini PQQ ekufuneka uyithathe yonke imihla?
Ukuza kuthi ga ngoku akukho mda ungasentla okanye ungaphantsi usekwe IPrroloquinoline Quinone (PQQ) idosi. Nangona kunjalo, iziphumo ezifunyenwe kwizifundo zezilwanyana zibonisa ukuba eli qela liba bioactive xa lithathwa ngeedosi eziphantsi njenge-2 mg. Nangona kunjalo, uninzi lwezongezelelo zokutya kwezi ntsuku ziyafumaneka kuluhlu lwe-20 mg ukuya kwi-40 mg, ethathwa njengoluhlu olukhuselekileyo. I-PQQ ubukhulu becala ifumaneka ngohlobo lwee-capsules, apho abantu bacetyiswa ukuba bathathe isisu esingenanto. Nangona kunjalo, abasebenzisi bayacetyiswa ukuba bangadluli kumyinge we-80 mg ngosuku.
Ndifanele ndiyithathe nini iCoQ10 kusasa okanye ebusuku?
Kufuneka iqatshelwe ukuba ukuthatha i-CoQ10 kufutshane nexesha lokulala kunokubangela ukulala kwabanye abantu, ke kungcono ukuyithatha ekuseni okanye emva kwemini. Izongezelelo zeCoQ41 zinokunxibelelana namanye amayeza aqhelekileyo, kubandakanya abacoci gazi, amayeza okulwa uxinzelelo kunye namayeza e-chemotherapy
Umela ntoni uQ kwi-CoQ10?
ICoenzyme Q10 (CoQ10) yi-antioxidant eveliswa ngumzimba wakho ngokwendalo. Iiseli zakho zisebenzisa iCoQ10 ekukhuleni nasekugcinweni.
Inokuvuselelwa njani imitochondria?
Ukuphendula kwisikhuthazo, i-mitochondria ihamba ngemijikelezo ye-fusion / fission yokuziqhelanisa nendalo. Kusengqiqweni ke ukucinga ukuba ubukho beplastiki yamandla e-mitochondrial dynamics iyimfuneko ekuhlaziyweni ngokutsha kwe-neuronal.
Ngaba iCoQ10 inayo iquinine kuyo?
ICoenzyme Q10 yeyosapho lwezinto ezibizwa ngokuba yi-ubiquinones ezinxulumene nolwakhiwo lwekhemikhali. Ukuba unesiqiniseko sokuba uxabisa iquinine, kuya kufuneka uthethe nogqirha wakho ngaphambi kokuqala ukongezwa kwemihla ngemihla kunye neCoQ10.
Kutheni le nto bathathe iquinine kwintengiso?
I-US Food and Drug Administration (i-FDA) iye yayalela ukuba kususwe iimveliso zamachiza ezingavunyelwanga eziqulethe i-quinine, icaphula iinkxalabo ezinzulu zokhuseleko kunye nokufa okuhambelana nokusetyenziswa kwazo. Isenzo siyinxalenye yomzamo omkhulu wokususa zonke iziyobisi ezingakhuselekanga, ezingavunyelwanga kwimarike.
Yeyiphi eyona ndlela ilungileyo yecoenzyme Q10?
I-Ubiquinol i-akhawunti ye-90% ye-CoQ10 egazini kwaye yeyona ndlela ifunekayo. Yiyo loo nto kucetyiswa ukuba ukhethe kwizongezo eziqulathe ifom ubuquinol
Wenza ntoni uCo Q 10 emzimbeni?
I-CoQ10 ibonakalisiwe ukunceda ukuphucula impilo yentliziyo kunye nolawulo lweswekile yegazi, ukunceda kuthintelo kunye nonyango lomhlaza kunye nokunciphisa ukuphindaphindeka kwemigraines. Inokunciphisa nomonakalo we-oxidative okhokelela ekukhathaleni kwezihlunu, ukonakala kolusu kunye nezifo zobuchopho kunye nemiphunga.
Ngaba PQQ ukuwela igazi ingqondo isithintelo?
Isicatshulwa. IPyrroloquinoline quinone (PQQ), ngenye indlela eyaziwa ngokuba yi-methoxatin, yinto enyibilikayo yamanzi, i-redox-cycling orthoquinone eyayiqale yahlukaniswa neenkcubeko zebacteria ye-methylotropic. … Kuyabonakala ukuba kwisilwanyana siphela, nangona kunjalo, i-PQQ ayiweli kumqobo wegazi-nengqondo.
Kutheni sifuna iPyrroloquinoline Quinone (PQQ)?
Njengokuba abantu bekhula, ingqondo yabo inyanzeleka ukuba ilwe nemithombo emininzi yomonakalo. Ngelixa eminye imithombo yerejista yomonakalo ingafikanga kwisiphumo esincinci kwingqondo yomntu, umonakalo othile uba yinto enegalelo kukuphazamiseka kwemithambo-luvo kunye nokwenzakala okuqhubekayo okuchaphazela imithambo yegazi. Kwiminyaka yakutshanje, abantu bakhathazeke ngakumbi ngempilo yobuchopho kwaye ke, uphando, kunye nokwazisa malunga nokusebenza kwengqondo kunye nempilo, kuye kwaqina kakhulu. Abaphandi baqhuba ngokuqhubeka nezifundo zokufunda kunye nokuhlalutya iziphumo zeekhemikhali ezahlukeneyo kunye nezinto ezihlanganisiweyo kwimpilo yengqondo yomntu. Enye yezi zinto zivelise umdla wabaphandi kunye nososayensi kwihlabathi liphela yiPyrroloquinoline Quinone (PQQ). Kweli nqaku, sixoxa ngayo yonke into malunga nePyrroloquinoline Quinone, kubandakanya ukusebenza kwayo, izibonelelo, umda wedosi kunye neziphumo ebezingalindelekanga. Ke funda ngoku.
Nciphisa ukuvezwa kwetyhefu. Ukubonelela ngezondlo ezikhusela i-mitochondria kuxinzelelo lwe-oxidative.
Sebenzisa izondlo eziququzelela ukuveliswa kwemitochondrial ATP.
Ngaba unokonyusa imitochondria?
Ukuzivocavoca umzimba yindlela efanelekileyo yokunyusa ukungena kweoksijini, okubaluleke kakhulu kumjikelezo we-mitochondria's Krebs Njengoko umzimba wakho usebenzisa amandla amaninzi, uya kuzinyanzela ukuba uvelise i-mitochondria engaphezulu ukuze uqhubeke nemfuno.
Ngaba iPQQ quinine?
I-Pyrroloquinoline quinine, ekwabizwa ngokuba yi-PQQ, yi-redox cofactor kunye ne-polyphenolic compound ehlala ifumaneka kwizityalo zokutya. Itholakala kwi-cytoplasm yeeseli kwaye inceda ekunciphiseni ukuphendula kunye ne-oxidation.
Yintoni efumaneka kuyo iquinine ngokwendalo?
Iquinine sisakhi esibuhlungu esivela kwixolo lomthi wecinchona. Umthi ufumaneka kakhulu eMzantsi Melika, kuMbindi Merika, kwiziqithi zeCaribbean, nakwinxalenye zonxweme olusentshona yeAfrika. UQuinine ekuqaleni waveliswa njengeyeza lokulwa isifo seengcongconi.
Imele ntoni iPyrroloquinoline Quinone disodium ityiwa (PQQ)?
Ikhweshine eyandulela isiqinisekiso (PQQ, ngamanye amaxesha ekubhekiswa kuyo njengemibuzo yovavanyo yomnikezeli ngeenkonzo) ibeka uthotho lwemibuzo abanokuthi bayiphendule malunga nabaniki maxabiso malunga nenqanaba labo lamava, amandla kunye nokuma kwabo.
Nguwuphi umahluko phakathi kwe-coQ10 kunye ne-ubiquinol?
IPyrroloquinoline quinone (PQQ) sisinyibiliki esinyibilikayo esinamanzi esine-anti-oxidant. Uphononongo lwangaphambili kwiigundane ezondla ukutya okuphelelweyo kwe-PQQ kubonise ukuba amanqanaba aphezulu e-serum triglyceride (TG) anciphile emva kokongezwa kwe-PQQ.
Ngaba iPQQ ikhuselekile?
Uphando olwenziweyo ukuza kuthi ga ngoku lufumene ukuba i-PQQ iyanyamezelwa kakuhle ngumzimba xa uthathwa ngaphakathi kwemida ebekiweyo. Nangona kunjalo, ukugqitha kumthamo omiselweyo kunokukhokelela kwiziphumo ebezingalindelekanga, njengokuqaqanjelwa yintloko, ukudinwa, nokudinwa. Ke, abasebenzisi bayacetyiswa ukuba banamathele kwi-40 mg ekhuselekileyo ngomthamo ngosuku kwaye bangabi ngaphaya kwe-80 mg dosage. Okubaluleke ngakumbi, nangona i-PQQ isaziwa ukuba inyamezelwe ngumzimba, kungcono ukubonana nodokotela ngaphambi kokuqala kokutya ukuba unayo nayiphi na imeko ye-preexisting.
Ngaba iPQQ ibhetele kuneCoQ10?
I-CoQ10 ifana ne-supercharger ephucula isantya sikaloliwe. I-PQQ injenge nkampani yokwakha ehlala isebenza ukongeza iimoto kuloliwe wakho. Isishwankathelo, i-CoQ10 iphucula isantya soololiwe bakho bokuvelisa amandla, ngelixa i-PQQ isongeza kwaye isakha amandla ongezelelweyo kuloliwe wakho.
Yimalini CoQ10 ekufuneka ndiyithathile?
Akukho dosi imiselweyo yeCoQ10. Izifundo zisebenzise iidosi ze-CoQ10 ukusuka kwi-50 milligrams ukuya kwi-1,200 milligrams kubantu abadala, ngamanye amaxesha kwahlulwa kwaba ngamayeza amaninzi kwisithuba sosuku. Umthamo wemihla ngemihla zii-100 milligrams ukuya kwi-200 milligrams.
Ngaba i-CoQ10 ibangela amahlwili egazi?
Iintsholongwane. I-CoQ10 inokwenza iziyobisi ezinciphisa igazi, ezinjenge-warfarin (Jantoven), ezingasebenzi kakuhle. Oku kunokunyusa umngcipheko wegazi.
Kutheni i-Q10 ibiza kangaka?
Xa i-Q10 isuka egazini iye kwiiseli nakwizicubu, iphinde iguqulwe ibuyele kwifom yayo enamandla, ubiquinone. Uhlobo lwe-ubiquinol lwe-Q10 aluzinzanga kwaye, ngenxa yoko, lubiza kakhulu ukuba umenzi wecapsule ye-Q10 asebenze naye.
I-CoQ10 ithatha ixesha elingakanani ukusebenza?
Njengoko amanqanaba e-Ubiquinol aqala ukubuyiselwa kwi-plasma yegazi, abantu abaninzi kufuneka babone ukunciphisa iimpawu zokudinwa malunga nosuku lwesihlanu emva kokuqala ukongezwa. Ngokwesiqhelo kwiiveki ezimbini ukuya kwezintathu, isixa somzimba wakho se-Ubiquinol siyakufikelela kumanqanaba aphezulu, kwaye uninzi luza kuziva umahluko kumandla ngeli xesha.
Zithini iziphumo zokuthatha i-CoQ10?
Izongezelelo zeCoQ10 zibonakala zikhuselekile kwaye zivelisa iziphumo ebezingalindelekanga ezimbalwa xa zithathwa njengoko kuyalelwe.
Iziphumo ezinobungozi zinokubandakanya iingxaki zokugaya ezifana:
Intlungu ephezulu esiswini
Ezinye iziphumo ezichaphazelekayo zinokubandakanya:
Ukurhawuzelela ulusu okanye irhashalala
Ukucaphuka okanye ukuphazamiseka
Ukhuseleko lokusetyenziswa kwe-CoQ10 ngexesha lokukhulelwa kunye nokuncancisa alukenziwa. Sukusebenzisa i-CoQ10 ukuba ukhulelwe okanye uncancisa ngaphandle kwemvume yogqirha.
Ngaba i-pyrroloquinoline quinone efanayo ne-quinine?
I-Pyrroloquinoline quinine, ekwabizwa ngokuba yi-PQQ, yi-redox cofactor kunye ne-polyphenolic compound ehlala ifumaneka kwizityalo zokutya. I-PQQ ingasetyenziswa njengesongezelelo sokutya ukunceda ukuveliswa kwamandla eselula kunye nempilo ye-mitochondrial kunye nokukhusela umzimba kuxinzelelo lwe-oxidative.
Ngaba i-PQQ ilungile entliziyweni?
Isondlo esinamandla i-PQQ inokuthintela ukusilela kwentliziyo. Uphando olutsha lweklinikhi, olupapashwe kuhlelo lwamva nje lweCardiovascular Diagnosis & Therapy, luqukumbela ngelithi isondlo esibalulekileyo sePyrroloquinoline Quinone (PQQ) sinokudlala indima ekuthinteleni ukusilela kwentliziyo okungapheliyo (CHF).
Ngaba ungayithatha i-PQQ ngelixa ukhulelwe?
Iziphumo zethu zibonisa ukuba ukuxhaswa nge-PQQ, ngakumbi ngexesha lokukhulelwa kunye nokuncancisa, kukhusela inzala kwinkqubo yophuhliso lwe-WD ye-hepatic lipotoxicity kwaye inokunceda ekucothiseni ubhubhane we-NAFLD kwisizukulwana esilandelayo.
Ngaba i-PQQ ikhuselekile kubantu abaneswekile?
Ezi ziphumo zesifo seswekile ze-PQQ zaxhaswa ziipropathi zayo zokulwa ne-antioxidative, njengoko i-PQQ yayingavimbeli kuphela izicubu ze-LPO kodwa ikwanyusa i-serum insulin kunye ne-HDL, kunye nee-antioxidants zeselula.
Uyomeleza njani imitochondria?
Iindlela ezili-10 zokuKhuthaza iMitochondria yakho
Yitya iikhalori ezimbalwa.
Ukuthatha izongezelelo zePQQ.
Lahla iikhabho ezisulungekileyo ezifana nesoda, isonka esimhlophe kunye neekeyiki.
Yitya iprotheyini esemgangathweni enje ngenkomo etyiswe ingca kunye namaqanda aphakanyiswe emadlelweni
Beka phambili ngokulala iiyure ezisi-8 busuku ngabunye.
Ukunciphisa uxinzelelo ngeendlela zokuphumla ezinje ngokucamngca okanye ukuphulula yonke imihla.
Zama unyango lobushushu.
Fumana ubuncinci imizuzu engama-30 yomsebenzi yonke imihla.
Yitya ukutya okune-antioxidant-rich with resveratrol njenge chocolate emnyama.
Yitya imithombo ye-omega-3 kunye ne-alpha-lipoic acid.
Yintoni i-PQQ antioxidant?
IPyrroloquinoline quinone (PQQ) yinoveli redox cofactor esandula ukufunyanwa kubisi lomntu. I-PQQ yayiyi-antioxidant esebenzayo ekhusela i-mitochondria ngokuchasene ne-oxidative-indid lipid peroxidation, ukuyilwa kwe-carbonyl kunye nokungasebenzi kwetyathanga lokuphefumla le-mitochondrial.
Yintoni ivithamini PQQ?
I-PQQ yinkomfa yendalo efumaneka kwiintlobo ezahlukeneyo zokutya. Isebenza njenge-antioxidant kwaye ixhasa ukusebenza kwe-mitochondrial esempilweni. Kuthathwa njengesongezelelo ukukhuthaza ukusebenza kwengqondo.
Yintoni iPQQ 20?
I-Pyrroloquinoline quinone okanye i-PQQ yindawo esandula ukufunyanwa enjengevithamini efumaneka ngokutya kwizityalo. Kwaqala ukufunyanwa njenge-cofactor yeebhaktheriya ezifanayo nendlela iiVithamini zeB ezisebenza ngayo ebantwini. I-PQQ ine-antioxidant kunye ne-B-vitamin efana nomsebenzi, enoluhlu olubanzi lwezibonelelo kwingqondo nasemzimbeni.
Kukuphi ukutya okuqukethe i-PQQ?
Mhlawumbi utya iPQQ encinci yonke imihla. Ifunyenwe kumanani amancinci kukutya okuninzi njengesipinatshi, ipepile eluhlaza, i-kiwifruit, i-tofu, i-natto (iimbotyi zesoya ezivutshiweyo), iti eluhlaza kunye nobisi lomntu. Nangona kunjalo, asihlali sifumana i-PQQ eninzi kukutya-kuqikelelwa ukuba yi-0.1 ukuya kwi-1.0 milligrams (mg) ngosuku.
Kukuphi ukutya okunyusa imitochondria?
Ezinye zezi zondlo ziphambili zibandakanya i-L-carnitine kunye ne-creatine, ezo zombini zibalulekile ekunikezeleni amandla kwi-mitochondria. Ungafumana okuninzi kokubini ngokongeza inyama yenkomo etyiswe ingca, inyathi, amaqanda, iinkukhu, iimbotyi, amandongomane, kunye nembewu ekutyeni kwakho.
Ngaba ukuzila ukutya kuyonyusa mitochondria?
Uphononongo lufumanise ukuba ukuzila ukutya kuphucula ukulungelelaniswa kwe-mitochondrial kunye ne-peroxisomes, uhlobo lwe-organelle olunokunyusa i-acid acid oxidation, inkqubo esisiseko yemetabolism.
Loluphi uqeqesho olonyusa imitochondria?
Uphononongo olutsha lufumanise ukuba umthambo-kwaye ngokukodwa uqeqesho lwexesha eliphakathi lokuzivocavoca i-aerobic njengokuhamba ngeebhayisikile kunye nokuhamba-kubangele iiseli zenze iiprotheyini ezininzi kwimveliso yazo evelisa amandla i-mitochondria kunye ne-ribosomes yazo yokwakha iiprotein, ziyeke ukwaluphala kwinqanaba leselula. .
Ungayilungisa imitochondria eyonakeleyo?
Kuye kwagqitywa ukuba ukulwa nomonakalo, i-mitochondria ineendlela zokuchazwa ezichanekileyo ezifanayo nezo zenucleus, phakathi kwazo: ukulungiswa kwesiseko (BER), ukulungiswa okungafaniyo (MMR), ukulungiswa kwekhefu elilodwa (SSBR), Ukupheliswa kokuphela kokujoyina i-microhomology (MMEJ), kunye nokubuyiselwa kwembali yekhaya.
Zeziphi izongezo ezonyusa imitochondria?
Izongezo zendalo zomlomo eziqukethe i-membrane phospholipids, i-CoQ10, i-microencapsulated NADH, l-carnitine, i-α-lipoic acid, kunye nezinye izondlo zinokunceda ukubuyisela ukusebenza kwe-mitochondrial kunye nokunciphisa ukudinwa okungathethekiyo kwizigulana ezinezifo ezingapheliyo.
Ukusetyenziswa kwePyrroloquinoline Quinone (PQQ).
IPrroloquinoline Quinone (PQQ) ekuqaleni kwakucingelwa ukuba yivithamini. Nangona kunjalo, uphando oluthe kratya luyifumene njenge-non-vitamin compound eyenzeka kuzo zombini ukutya kunye nakwizicubu zamayeza. Nangona kunjalo, kubalulekile ukuqaqambisa ukuba nangona kungekho phando luye lwaqinisekisa ubumbano lwalo mammalian, malunga ne-100-400 nanograms ye-PQQ yenziwa emzimbeni womntu yonke imihla. Ngelishwa, le mali ayonelanga ukuxhasa imisebenzi eyahlukeneyo ekuqinisekiswe ukuba iyayenza iPQQ. Ke, abantu bahlala becetyiswa ukuba basebenzise i-PQQ ngohlobo lwezongezelelo zokutya.
Ukutya okusilela kwi-PQQ akupheleli ekukhokeleni ukukhula okucothayo kodwa kunciphisa nomsebenzi wezesondo. Ngokufanayo, izifundo ezininzi zidibanise i-PQQ kunye nokukhula kwezinto kunye ne-mitochondrial biogeneis. Ngamazwi alula, umzimba womntu unokuxhamla kwi-PQQ njengoko ikhuthaza inani kunye nomsebenzi we-mitochondria, ngaloo ndlela ekhokelela kumanqanaba amandla ombane. I-PQQ yaziwa ngokuba yiarhente ye-REDOX ebalaseleyo kwaye ithintele ukuzicoca-ngokwakho kunye ne-polymerization.
Izibonelelo zePyrroloquinoline Quinone (PQQ).
Inzala kwiPyrroloquinoline Quinone inyuke kakhulu kule minyaka imbalwa idlulileyo njengoko eli khompawundi linxulunyaniswe nezibonelelo ezininzi. Apha, sijonga ezona zinto zibalulekileyo kwiPyrroloquinoline Quinone (PQQ).
① I-PQQ idityaniswe naMandla aPhuculweyo ngokuBanzi
IMitochondria zii-organelles ezincinci ezikhoyo ngaphakathi kweeseli kwaye zihlala zibizwa ngokuba yindawo yokugcina amandla eseli njengoko zikhupha amandla ekutyeni, ngaloo ndlela zibonelela ngamandla iiseli ezifuna ukwenza umsebenzi wazo. IPyrroloquinoline Quinone ivumela i-mitochondria ukuba isebenze ngcono, yiyo loo nto ikhokelela kwimveliso yamandla ngaphakathi kweeseli. Oku kunyuka kwamandla ngaphakathi kweeseli ekugqibeleni kuyifumana indlela eya kuwo wonke umzimba, kwaye oko kukhokelela kumandla ngakumbi kunye namandla apheleleyo. Ukuba uhlala ufumana ukonqena okanye amandla asezantsi, izongezo ze-PQQ ziya kukunceda ukonyuse amanqanaba akho amandla. Ipapashiwe: Iziphumo zePyrroloquinoline Quinone (PQQ)
② Iphucula izinto zokukhula kwemithambo
IPyrroloquinoline Quinone inxibelelana neendlela zeselfowuni kwaye kwinkqubo, ngokungathandabuzekiyo ichaphazela imeko yokukhula kwentliziyo. Oku, kukhokelela kuphuculo oluphuculweyo lweeseli ze-neuronal kunye neethambo kwithishu ye-cranial. Ke, i-PQQ ihlala inxulunyaniswa nokusebenza kwengqondo okuphuculweyo. Kuba ukudakumba kwe-NGF kuhlala kunxulunyaniswa nesifo se-Alzheimer, izongezo ze-PQQ zihlala zimiselwe ukunceda unyango lweemeko ezinxulumene nobudala.
I-QPQQ Intake idityaniswe nokuPhucula ukulala
Isifundo sihlalutye isiphumo sokutya kwe-PQQ kubuthongo babantu. Uphononongo luhlalutye abathathi-nxaxheba kwisithuba seeveki ezisibhozo kwaye bafumanisa ukuba abo bahlala besitya iiveki ezisibhozo babekwazi ukulala ngcono. Olu phando luye lwabonisa ukuba ukutya i-PQQ kunciphisa i-cortisol, ihormone yoxinzelelo ephazamisa ukulala okuqhelekileyo. Nangona uphando oluthe kratya luyafuneka kule ndawo, uphando lokuqala ludibanisa ngokucacileyo ukungeniswa kwe-PQQ kunye nokulala okuphuculweyo.
④ I-PQQ ikhuthaza ukuPhila ngokuBanzi ngokuNciphisa uxinzelelo lweOxidative
I-PQQ yaziwa ngokuba neepropathi eziphezulu ezichasayo-iyanciphisa inqanaba le-C-protein esebenzayo kunye ne-IL-6 emzimbeni, zombini ezo zinoxanduva lokudumba. Iipropathi zayo ze-oxidative zenza ukuba i-PQQ ilwe ngokufanelekileyo nxamnye noxinzelelo lwe-oxidative, nesisizathu esiqhelekileyo sezifo ezininzi ezingapheliyo, ezinjengeecarcinomas kunye nezifo ezingenagazi. PQQ kunciphisa uxinzelelo ngokunciphisa umonakalo oxidative okubangelwa radicals simahla nokunyusa ukutya.
⑤ I-PQQ ngokudityaniswa neCoQ10 iphucula ukusebenza kweMemori
Ukutya kwe-PQQ kudityaniswe noxinzelelo oluncitshisiweyo, olukhokelela ekusebenzeni kwengqondo kunye nokuphucula imemori. Izifundo zophando zenziwe ukujonga ukuba iPQQ iyichaphazela njani inkumbulo. Uphando lufumanise ukuba i-PQQ isebenza ngokubambisana neCoQ10, i-coenzyme esebenza njenge-antioxidant ekhulisa imetabolism kwaye ikhusela iiseli kumonakalo. I-PQQ ngokudibeneyo neCoQ10 ibonakalise ukuphucula ukusebenza kwememori.
⑥ Ezinye izibonelelo zePQQ
Ngaphezulu kwezibonelelo zikhankanyiweyo ngaphambili, i-PQQ ikwabonelela ngezinye izibonelelo zophando olusaqhubekayo. Umzekelo, uphando lwangaphambili luqine ukuba ukuthathwa kwe-PQQ kukhokelela ekuphuculeni ukuzala.
Uyithenga phi iPyrroloquinoline Quinone (PQQ) Powder in Bulk?
Ukuba ungumvelisi wezongezo zempilo obandakanyeka kwimveliso ye-Pyrroloquinoline Quinone kwisilinganiselo esikhulu, kuyacaca ukuba kufuneka ujonge umthengisi wezinto ezingafunekiyo onokukunika umgubo wePQQ ngobuninzi. Ukufumana umthengisi onokuthenjwa ngomgangatho kunye nokuthembeka sisiseko sokuseta ishishini eliphumelelayo.
Ukuba ukhangele thenga iPyrroloquinoline Quinone (PQQ) umgubo ngobuninzi, eyona ndawo ifanelekileyo yokuthenga yiCofttek. ICofttek lushishino oluphezulu lobuchwephesha lokuxuba amayeza olwasekwa ngonyaka ka-2008 kwaye lisebenza kumgaqo “weSiseko soMgangatho, uMthengi wokuqala, iNkonzo yokunyaniseka, ukuZuza ngokuBambisana”. Inkampani izinikele kuvavanyo olugqibeleleyo, oluvumela ukuba lubonelele ngeenkonzo ezikumgangatho ophezulu kunye neemveliso kubathengi bayo. ICofttek ngoku ibonelela ngeemveliso zayo kwiinkampani ezixuba amayeza e China, Europe, India nase North America. I-PQQ powder enikezelwa yinkampani iza kwiibhetshi ezingama-25 kilogram, ezaneleyo ukuvelisa iibhetshi ezininzi zemveliso yakho. Okubaluleke ngakumbi, iCofttek ineqela lolawulo elinamava kunye neqela lokuqala le-R & D. Unako ke, ke, ukuqiniseka ukuba uyakufumana konke ukuhanjiswa kweemveliso ezikumgangatho ophezulu ngendlela emangalisayo ngexesha elifanelekileyo. Ukuba ujonge ukuthenga iPyrroloquinoline Quinone ngobuninzi, nxibelelana neqela kwinkonzo yecofttek.
(1) Ipapashiwe:Iziphumo zePyrroloquinoline Quinone (PQQ) yokuNgeza kwiNdlela yokuSebenza yoQeqesho lweeerobic kunye neeIndices zeMitochondrial Biogenesis kwiiNdoda ezingafundiswanga
(2) Isiphumo se-neuroprotective se-pyrroloquinoline quinone kwingozi yokulimala kwengqondo
(3) Inkqubela phambili yamva nje kwizifundo malunga nezibonelelo zempilo ze-pyrroloquinoline quinone
Iziphumo ze-Antioxidant Supplement Pyrroloquinoline Quinone Disodium Ityuwa (BioPQQ ™) kwiMisebenzi yokuqonda
(5) Iprroloquinoline Quinone
(6) Uhambo lokujonga umz.
(7) I-Oleoylethanolamide (oea) -i-wand yemilingo yobomi bakho.
(8) I-Anandamide vs cbd: yeyiphi engcono kwimpilo yakho? Yonke into ekufuneka uyazi ngabo!
(9) Yonke into ofuna ukuyifumana malunga ne-nicotinamide riboside chloride.
(10) Izongezo zeMagnesium l-threonate: izibonelelo, idosi, kunye neziphumo ebezingalindelekanga.
(11) Palmitoylethanolamide (ertyisi): izibonelelo, idosi, ukusetyenziswa, isongezelelo.
(12) Izibonelelo zezempilo ezi-6 eziphezulu ze-resveratrol supplements.
(13) Izibonelelo ezi-5 eziphezulu zokuthatha i-phosphatidylserine (ps).
(14) Olona hlobo longezelelekileyo lwe-alpha gpc.
(15) Olona nyango lulungileyo lokuguga lwenicotinamide mononucleotide (nmn).
Ndiyayithanda ipqq. Kudala ndiyisebenzisa phantse i-2yrs. Kum kuphucula amandla. Hayi ngendlela ekhuthazayo kodwa eyonyusa ngokubanzi ekusebenzeni kwengqondo kunye namandla omzimba. Ndiyisebenzisa yonke imihla nge-10 okanye i-20 mg w 100mg ubiquinol. Ndiyincoma.
Ndithatha i-40 mg ngosuku. Amandla am ahambelana imini yonke, kwaye ndiziva ukuba inegalelo kumgangatho wam omkhulu wokulala kunye ne-ashwagandha, i-magnesium, kunye ne-l-theanine.
I-Pyrroloquinoline Quinone ikhankanyiwe kwisifundo sendlela yokuphilisa kwi-floxing. Ivuselela i-biogenesis ye-mitochondria entsha kunye ne-synergizes neCoQ10 yokulungiswa kweseli. Ndibona umahluko omkhulu kumandla kwaye ngamanye amaxesha imeko xa ndiyithatha.